Maraykanka oo tuhunsan in uu Al dawaahiri ku sugan yahay Pakistan. – SBC
Maraykanka oo tuhunsan in uu Al dawaahiri ku sugan yahay Pakistan.
Madaxa Sirdoonka Golaha Wakiilada Dalka Maraykanka Mike Rogers ayaa sheegay in ay tuhun sanyihiin in ku xigeenka Hogaanka Al qacida Ayman Al dawaahiri in uu ku c sugan yahay gudaha dalkaasi Pakistan.
Rogers ayaa hadalkan sheegay xili uu warbixinayay barnaamijka 60 Minites ee ka baxa Kanalka dalka Maraykanka laga leeyahay ee CBS,waxaana uu sheegay in ay tahay tuhun weyn oo ay dowladoodu ka qabto arinkaasi.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay in Pakistan ay noqotay hooy saaxiib dhow la ah Al qacida,ayna suura gal tahay in kuwo badan oo ka tirsan kooxdaasi in ay gudaha dalka Pakistan ku dhuumanayaan.
Sadex kamid ah xaasaskii hogaamiyihii la dilay ee Al qacida Sheekh Usama Bin ladin ayaan wax jawaab ah aanay ka helin sirdoonka Maraykanka,iyadoona xildhibaanka oo u qaabilsan aqalka walkiilada sirdoonka uu sheegay in ay ahayd baaritaan aanay natiijo ka dhalan.
Maraykanku waxaa uu wadaa Baaritaano uu ku xaqiijinayo,kuna daba galayo qaabkii Usama kusoo galay Pakistan iyo habkii uu ugu noolaa Abbotabad kahor inta aanay ciidamadoodu dilin.
Ayman Al dawaahiri oo u dhashay dalka Masar ayaa ah ku xigeenkii hogaamiyihii geeriyooda ee Al qacida,waxaana suura gal ah in ay shabakada Al qacida ay u magaciwdo hogaamiyihii badali lahaa Usama Bin ladin.